YouVersion ၏ ကိုယ်ရေးသီးသန့်ပေါ်လစီ | ကျမ်းစာအက်ပ် | Bible.com
YouVersion ၏ ကိုယ်ရေးသီးသန့်ပေါ်လစီ
April 2, 2020 တွင်နောက်ဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။
အောက်ဖော်ပြပါပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၏ကိုယ်ရေးသီးသန့်ပေါ်လစီ နှင့် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များသည် YouVersion နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းချုပ်ပါလိမ့်မည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဗားရှင်းသည်အုပ်ချုပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း Google Translate ကဲ့သို့သောအလိုအလျောက်ဘာသာပြန်သည့်ကိရိယာကိုအသုံးပြု၍ စာရွက်စာတမ်းများကိုသင်၏ဘာသာစကားဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်ဘာသာပြန်တည်းဖြတ်မှုများကိုဤစာမျက်နှာတွင်အသိပေးပါလိမ့်မည်။
အရေးကြီး။ ကျေးဇူးပြု၍ ဒီစာကိုအရင်ဖတ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝသည် မိသားစု၊ အလုပ်၊ လူမှုရေး ကတိကဝတ်များနှင့် အခြားအရာများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်တာဝန်များကိုစီမံရန်နှင့် ဆက်၍ ဆက်သွယ်ရန်စမတ်ဖုန်းများနှင့်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းများကိုအားထားကြသည်။
တက်ကြွသော ယုံကြည်သူ အသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်၌ Life.Church သည် လူတို့အား ဘဝပြောင်းလဲခြင်းဆီသို့ ဦး တည်စေမည့် နည်းလမ်းများဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာကို တွေ့ကြုံခံစားရန် ထွန်းသစ်သည့်နည်းပညာများအားဖြင့် အသုံးချနိုင်မည့်နည်းလမ်းများကို စတင်ရှာဖွေခဲ့သည်။ အဲဒါက ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ Apple’s App Store မှာ ပထမဆုံ းအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်း ၂၀၀ ထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ YouVersion Bible App ကို ဖန်တီးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဦး ဆောင်ခဲ့တယ်။
YouVersion ကို အသုံးပြုသူ များစွာတိုးလာသည်နှင့်အမျှ ဘုရားသခင်နှင့် သူတို့၏ ဆက်ဆံရေးကို လုံခြုံစိတ်ချစွာတိုးပွားစေရန် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတွင်ယုံကြည်ခြင်းကိုလေ့လာရန် ကူညီခြင်း၏ တန်ဖိုးကို ကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
YouVersion သည် သင်၏ဖုန်းဖြင့် ကျမ်းစာဖတ်ရန် ခွင့်ပြုထားသော အီလက်ထရောနစ် ဖတ်စာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးပေးသေ ာထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ဂရုတစိုက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်တီထွင်သည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော ဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေရန်နှင့် သင်၏ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာတစ်ခုတွင်ရှာဖွေရန်အတွက် အသွင်အပြင်တစ်ခုစီကို ရေးဆွဲသည်။ ဒါကြောင့် သင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပါ။ သင်မျှဝေသည့် အရာနှင့် မည်သူနှင့် မျှဝေရန် သင်ရွေးချယ်ပါ။ သင့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေက သင့်အတွက်သာလျှင်ဖြစ်သည်။ YouVersion သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုရောင်းချခြင်းမပြုပါ။ သင်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲအခြားသူများကိုမျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။
ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ပေးသော YouVersion ၏ရှုထောင့်တိုင်းသည် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အခြားဆက်စပ်အကြောင်းနှင့် ကြော်ငြာများလည်းမရှိပါ။ - အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်၎င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျမ်းစာနှင့် ပါ၀င်သူများအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်သလဲ။ Life.Church ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအနေဖြင့် YouVersion သည် Life.Church ၏အထွေထွေဘတ်ဂျက်မှ အများစုကို ထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူတို့အား သမ္မာကျမ်းစာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်နှင့်ဘဝပြောင်းလဲခြင်းကိုလူတို့အားအသုံးပြုရန်နည်းပညာကိုအသုံးချနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်တွင်ပါ ၀ င်လိုသူတစ် ဦး ချင်း၏အလှူငွေများမှလည်းထောက်ပံ့သည်။ ။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ စုဆောင်းအသုံးပြုမည်၊ မျှဝေမည်နှင့်မည်သို့ဆောင်ရွက်မည်ကို ဆွေးနွေးထားသောကြောင့် ဤ ကိုယ်ရေးသီးသန့် ပေါ် လစီကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့စုဆောင်ထားပုံဖြစ်သည်။
YouVersion ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင်သည် ဤသီးသန့်တည်ရှိမှု မူဝါဒနှင့် ၎င်း၏စည်းကမ်းချက်များကိုသဘောတူပြီးသင်၏အချက်အလက်များကို ယူနိုက်တက်စတိတ် (USA) တွင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုသင်သဘောတူသည်။ YouVersion သင်၏အသုံးပြုမှုသည်လည်းငါတို့ကအုပ်ချုပ်သည် အသုံးပြုခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။
YouVersion အမှတ်တံဆိပ်ပါ ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးအတွက် မွမ်းမံထားသည့်ပေါ်လစီများတွင် သင်တွေ့ရှိသွားရမည့်အရာများအကျဉ်းချုပ်မှာ -
သင်၏ YouVersion အတွေ့အကြုံကို ပို၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်စေရန်သင်၏အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ အသုံးပြုပုံဖြစ်သည်။
ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီသည် YouVersion နှင့်သင်၏အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုမှ သင်စုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်အမျိုးအစားများနှင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုသင်၏ YouVersion အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်မည်သို့ဖော်ပြပုံဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ YouVersion အကောင့်တစ်ခုကိုဖန်တီးသောအခါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ application များသို့မဟုတ်ဆိုဒ်များတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များသည်ပိုမိုစိတ်ကြိုက်အတွေ့အကြုံများကိုပေးအပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင် ပေးသေ ာသတင်းအချက်အလက်များ၏ သီးသန့်ဖြစ်မှုကိုယူပြီးကျွန်ုပ်တို့အလေးအနက်ထားသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်၏အချက်အလက် အားကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်သည့်လုံခြုံရေးအကာအကွယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကျင့်သုံးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတတိယပါတီကြော်ငြာရှင်များသို့မဟုတ်တတိယပါတီကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကြော်ငြာကွန်ယက်များနှင့်မျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။
သင်သည် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရယူစုဆောင်းခြင်း၊ ဝေမျှခြင်းနှင့် Life.Church ကသိမ်းထားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုရွေးချယ်မှုများ အောက်မှာဆွေးနွေးထားသည်။ သင်၏ပထမဆုံးအချက်အလက်များကို YouVersion နှင့်စတင်သောအခါ၊ သင်၏ YouVersion လုပ်ဆောင်ချက်အချို့နှင့်သင်၏ YouVersion အသင်း ၀ င်အကောင့်၏ ချိန်ညှိချက် တွင်လည်းကောင်း၊ https://my.bible တွင်လည်းကောင်း ရွေးချယ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ com / settings ကို။
ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုကျင့်ထုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌ရှိနိုင်သောမည်သည့်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါတယ်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များရှိပါက Life.Church, Attn .: YouVersion Support၊ 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 သို့အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ် help@youversion.com သို့ဆက်သွယ်ပါ။
YouVersion သည်သင့်အားသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗားရှင်းမဟုတ်သည့်အခြားဘာသာပြန်ချက်များပေးသည့်အခါ၊ သင်ဘာသာပြန်ခြင်းသည်သင်အဆင်ပြေစေရန်အတွက်သာဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်မူပိုင်ခွင့်မူဝါဒ၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော YouVersion နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းချုပ်လိမ့်မည်ဟုသင်သဘောတူသည်။ သီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီ၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗားရှင်းနှင့်အဘယ်သို့ပြန်ပြောသည်ဆိုသည့်အကြားကွဲလွဲမှုများရှိပါကအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဗားရှင်းကို ဦး စားပေးရမည်။
ဤစာရွက်စာတမ်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် စာလုံးအတိုကောက်တွေကိုသုံးပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့်“ YouVersion” ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်
ကဲ့သို့သော YouVersion မိုဘိုင်း application များ
ကဲ့သို့သော YouVersion ကွန်ရက်စာမျက်နှာများ
အခြားပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိ ဤ YouVersion အပလီကေးရှင်းများ
YouVersion ထုတ်ကုန်များကို Life.Church Operations, LLC မှပိုင်ဆိုင်ပြီးလည်ပတ်သည်။ ဤမူဝါဒကို“ Life.Church”,“ ကျွန်ုပ်တို့ “ we” ဟုရည်ညွှန်းပါမည်။ YouVersion ကိုမှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများမှခွင့်ပြုပါသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့သည်“ ဧည့်သည်များ” အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများသို့မဟုတ်“ အသင်းဝင်များ” ဟုခေါ်ပါမည်။ ဤပေါ်လစီနှစ်ခုလုံးကိုရည်ညွှန်းသောအခါ “ အသုံးပြုသူ” (သို့)“သင်” ဟူသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်သည်သင်တောင်းခံသည့် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံတင်ပြရန်သင်ငြင်းဆန်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အားအချို့သော YouVersion ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းကိုတားမြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ထိုသတင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရသည့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
YouVersion ကိုအသုံးပြုရန်အသင်း ၀ င်မှုအကောင့်တစ်ခုကိုသင်စာရင်းသွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်အသင်း ၀ င်ခြင်းက YouVersion ကိုပိုမိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ YouVersion အသင်း ၀ င်မှုအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပထမအမည်၊ နောက်ဆုံးအမည်နှင့်ခိုင်လုံသောအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုပေးရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏အချက်အလက်များကိုသင်၏တိကျသော YouVersion အသင်းဝင်နှင့်ဆက်စပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကဤအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုမည်။ YouVersion အသင်း ၀ င်အကောင့်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးသောအခါသင်၏လိင်၊ အသက်၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ သင်၏တည်နေရာဖော်ပြချက်၊ အကျဉ်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ ပရိုဖိုင်းရုပ်ပုံနှင့်သင်ပေးမည့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည် အကယ်၍ ပေးအပ်ပါကသင်၏အကောင့်နှင့်လည်းသက်ဆိုင်လိမ့်မည်။
အသင်း ၀ င်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအပြင်သင်၌ကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံဖြည့်စွက်မည့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏အချက်အလက်များကို YouVersion သို့သင်ပို့သောအခါ၊ ပို့သောအခါသို့မဟုတ် upload လုပ်သောအခါသင်မှကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။ သင်ဤအချက်အလက်ကိုပေးရန်မလိုပါ၊ သို့သော်သင်မလုပ်ခဲ့ပါက၎င်းသည်သင်၏ YouVersion နှင့်သင်၏ YouVersion ကိုသင်၏အပြည့်အဝအတိုင်းအတာအထိကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။ သင်ပေးသည့် အချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သော YouVersion လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ရယူစုဆောင်းထားသော သင့်၏အချက်အလက်များကို အောက်တွင်ဆွေးနွေးထားသည်။
YouVersion သည်အသုံးပြုသူများအားအချို့သောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်ဝေဖြန့်ချိရန်နှင့်ပြသရန်ခွင့်ပြုသည် (ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို“ တင်ခဲ့သည်” နှင့်အကြောင်းအရာကို“ ပို့စ်များ”) ဟုရည်ညွှန်းသည်။ YouVersion မှသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် YouVersion၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များရှိအများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများတွင်တင်ပို့ချက်များသို့မဟုတ်အခြား YouVersion သို့မဟုတ်အခြားပလက်ဖောင်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများပေါ်တွင်သင်ဆက်သွယ်လိုသောတတိယပါတီများသို့ပို့ခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းတွင်သူငယ်ချင်း၏ရေးသားချက်ကိုမှတ်ချက်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်အခန်းငယ်ရုပ်ပုံဖန်တီးခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ YouVersion သည်သင့်အကောင့်တွင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အချို့သောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည် - ဥပမာအားဖြင့်ကျမ်းချက်၏မှတ်စုတစ်ခုသို့မဟုတ်မှတ်သားထားခြင်း - အချို့ကိုသင်အခြားသူများအားဖြန့်ဝေရန်တင်ပေးနိုင်သည်။ သင်ဖန်တီးရေးသားထားသောအကြောင်းအရာများအားလုံးသည်“ အသုံးပြုသူ၏ပံ့ပိုးမှုများ” ကိုတင်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏အသုံးပြုသူထည့် ၀ င်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသည့်အတိုင်းအသုံးပြုသူထည့် ၀ င်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းစသည်တို့ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်။ သင်၏သုံးစွဲသူထည့် ၀ င်မှုများကိုသင်၏အကောင့်နှင့်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပါကပူးပေါင်းတင်ဆက်မှုများ၊ လူမှုမီဒီယာများ၊ သတင်းဘုတ်ပြားများသို့မဟုတ်အခြားအများပြည်သူဆိုင်ရာအွန်လိုင်းဖိုရမ်များမှတစ်ဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလျှင်၎င်းအချက်အလက်များကိုအခြားသူများကစုဆောင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူထည့် ၀ င်မှုများကိုသင်ကိုယ်တိုင်စွန့် စား၍ တင်ပြသည်။ သင်၏အသုံးပြုသူထည့် ၀ င်မှုများကိုမျှဝေရန်သင်ရွေးချယ်ထားသောအခြားအသုံးပြုသူများသို့မဟုတ်တတိယအဖွဲ့အစည်းများ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏မျှဝေသုံးစွဲသူထည့် ၀ င်မှုများကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရှုမြင်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းများပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏အသုံးပြုသူထည့် ၀ င်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမျှကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။
သင်သည် YouVersion သို့မဟုတ် YouVersion နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်စေတနာအလျောက်လှူဒါန်းရန်ရွေးချယ်ပါကထိုငွေပမာဏကိုသ့ကဒ်ပြား၊ ဘဏ်အကောင့်နှင့်အခြားငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပေးရန်အတွက်သင့်အားအချက်ပြလိမ့်မည်။ သင်၏လှူဒါန်းမှုအတွက်သတ်မှတ်ချက်ကိုသင်ပေးအပ်ပါကသင်၏အမည်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် / သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာစသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းလိမ့်မည်။ သင်၏လှူဒါန်းမှုကိုသင်တောင်းဆိုလိုသော ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် စုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏လှူဒါန်းမှုများကိုအခွန်ပေးဆောင်ရန် (သို့) သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုအတွက်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့်“ နှစ်ပတ်လည်ပေးအပ်မှုဖော်ပြချက်” နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့သည်လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်ထားသောငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤပေါ်လစီ၏နေ့စွဲအရကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အွန်လိုင်းလှူဒါန်းမှုများအတွက် Stripe သို့မဟုတ် PayPal ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤတတိယပါတီများကသင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုသတင်းအချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းတို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများကိုဤနေရာတွင်တွေ့နိုင်သည် - https://stripe.com/privacy; https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full။
သင့်ထံမှသတင်းအချက်အလက်များကို help@youversion.com သို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မှ help.youversion.comမှတဆင့်အီးမေးလ်ပို့ခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများကိုပေးပို့သည့်အခါ သိမ်းဆည်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ပို့သောအခါ၊ သင်၏ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်များကိုပြန်လည်ဖြေကြားရန်၊ သင်၏တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်နှင့် YouVersion နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်ထိုဆက်သွယ်ရေးများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီကိုသဘောတူခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤမူဝါဒတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း cookies များနှင့်အလားတူနည်းပညာများ (ဥပမာ - web beacons, pixels, tags နှင့် device cookie) ကိုအသုံးပြုရန်သင်သဘောတူသည်။ သင်သည်သင်၏ browser သို့မဟုတ် device settings ကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ YouVersion ကိုသုံးလျှင် cookies များကို disable လုပ်ရန်သင် YouVersion မှတစ်ဆင့်ပေးသော cookies အားလုံးကိုလက်ခံရန်သင်သဘောတူမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏စက်ကိရိယာများကို YouVersion ၏ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များပေါ်တွင်၊ ပိတ်ထားခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ Cookies များသည် YouVersion ၏အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအတွေ့အကြုံကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ကူညီသည်။ သူတို့သည်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်သင်၏ကြိုက်နှစ်သက်ရာများကို ကာလတစ်ခုမှ အခြားကာလတစ်ခုသို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်၊ သင်၏အကောင့်ကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် YouVersion မှတစ်ဆင့်ပေးသောထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်တိုးတက်စေသည်။ အသင်း ၀ င်အချက်အလက်များကိုအသင်း ၀ င်စာရင်းမှန်ကန်မှုနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုရန်သေချာစေရန်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်။ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် မဟုတ်သော သည်တတိယပါတီကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်စိတ်ဝင်စားမှုအခြေပြုကြော်ငြာများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန် cookies များသို့မဟုတ်အလားတူနည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်။
သင်၏ YouVersion အသုံးပြုမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များစုဆောင်းရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည် (အသွားအလာဒေတာ၊ IP တည်နေရာဒေတာ၊ မှတ်တမ်းများ၊ ဘရောင်ဇာအမျိုးအစား၊ ဘရောင်ဇာဘာသာစကား၊ တောင်းဆိုထားသောလုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်သင့်တောင်းဆိုမှုအချိန်) နှင့်အခြားဆက်သွယ်ရေးဒေတာနှင့်သင်ရယူသောအရင်းအမြစ်များအပါအဝင် YouVersion တွင် အသုံးပြု၍ ဖန်တီးနိုင်သည်။ သင့်အတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော YouVersion အတွေ့အကြုံနှင့်သင်နှင့်ပိုမိုထိရောက်စွာဆက်သွယ်နိုင်ရန်ဤအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို YouVersion နှင့် / သို့မဟုတ် YouVersion ၏အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ တစ်မူထူးသောစက်ပစ္စည်းအရေအတွက်စုစုပေါင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်၊ စုစုပေါင်းအသုံးပြုမှုကိုခြေရာခံရန်၊ အသုံးပြုမှုအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်အသင်းဝင်များနှင့် Vis ည့်သည်များအားလုံးအတွက် YouVersion ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေရန်စုဆောင်းသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်ဤအချက်အလက်များကိုပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies များမှစုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်များကို ၂၁ ရက်မျှထိန်းသိမ်းထားသော်လည်းဥပဒေအရလိုအပ်သည့်အခါသို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကဲ့သို့လိုအပ်သောအချိန်ကြာရှည်စွာသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
အင်တာနက်ဘရောင်ဇာအများစုသည်ကွတ်ကီးများကိုပုံမှန်အားဖြင့်လက်ခံသော်လည်းသင်ဤနည်းပညာအမျိုးအစားများကိုသင်၏ဘရောက်ဇာဆက်တင်များနှင့်အလားတူကိရိယာများမှတဆင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး cookies များအားလုံး ၀ ငြင်းပယ်ရန်သဘောတူနိုင်သည်။ သင်၏ဘရောင်ဇာသို့မဟုတ်စက်ပေါ်တွင်သင့်လျော်သောချိန်ညှိမှုကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည် cookies များကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်နိုင်သည်။ သို့သော်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကသင်သည် YouVersion ၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိလျှင်၊ YouVersion ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပြည့်အဝပေးအပ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားတားမြစ်လိမ့်မည်။ ဒီနည်းပညာများလိုအပ်သောအချို့သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်း။
Life.Church သည်သင်၏အခြားစက်ပစ္စည်းများ၊ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများ၊ သို့မဟုတ်သင်၏ YouVersion သို့မဟုတ်သင်၏စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူနှင့်သင်၏မိုဘိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအပါအ ၀ င်တတိယပါတီများမှပေးသောကျွန်ုပ်တို့၏အခြားအမျိုးမျိုးသောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများမှချိတ်ဆက်ထားသောသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးသော application များကိုထိန်း ညှိ၍ မရပါ။ ဤတတိယပုဂ္ဂိုလ်များသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် cookies များသို့မဟုတ်အခြားဖိုင်များကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်နေရာချခြင်း၊ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်သင့်ထံမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတောင်းခံခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူတို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်နွယ်နေနိုင်သည်သို့မဟုတ်အချိန်နှင့်အမျှသင်၏အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်အပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်များကိုအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ အက်ပ်များနှင့်အခြားအွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများမှရယူနိုင်သည်။ ဤတတိယပါတီများသည်သင့်အားစိတ် ၀ င်စားမှုအခြေပြု (အမူအကျင့်) ပစ်မှတ်ထားသောအကြောင်းအရာများပေးရန်သင့်အားဤအချက်အလက်များကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤတတိယပါတီများ၏ခြေရာခံသည့်နည်းပညာများသို့မဟုတ်၎င်းတို့မည်သို့အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မထိန်းချုပ်ပါ။ ပစ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်မှာမေးစရာမေးခွန်းများရှိလျှင်၊ တာဝန်ရှိသောပံ့ပိုးသူကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် YouVersion ကို Facebook နှင့် Google ကဲ့သို့သောတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ကြော်ငြာပြီးတတိယပါတီဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပစ္စည်းများ (“ SDKs”) ကိုအသုံးပြုသည်။ YouVersion ကို download လုပ်ခြင်းသည်တတိယပါတီဆိုက်တွင်တင်ထားသောကြော်ငြာတွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအား၎င်းတို့၏ဆိုက်များတွင်တင်ထားသောကြော်ငြာများနှင့်ထိုကြော်ငြာများမှရရှိသော YouVersion ဒေါင်းလုပ်များနှင့်ပတ်သက်သော စုစည်း၍ ဖယ်ထုတ်ထားသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမည်သည့်တတိယပါတီသို့မရောင်းချပေးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ SDK ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတတိယပါတီများသို့ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်တတိယပါတီကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများရောင်းချခြင်းကိုတောင်းခံရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းမပြုပါ။
ကိရိယာ ID နှင့်တည်နေရာနှင့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု။
YouVersion ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်ဝင်ရောက်သောအခါ (သို့) ထွက်ခွာသောအခါသင်မှလာသည့်ဆိုက်နှင့်သင်နောက်တစ်ခုသို့သွားသော URL နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသည်။ သင်၏ YouVersion ကိုသုံးသောအခါသင်၏ proxy server၊ operating system, web browser နှင့် add-ons များ၊ device identifier နှင့် features များနှင့် / သို့မဟုတ်သင်၏ ISP သို့မဟုတ် mobile carrier အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းရနိုင်သည်။ သင်၏ IP လိပ်စာအပါအဝင်သင်၏စက်ပစ္စည်းများနှင့်ကွန်ယက်များမှအချက်အလက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများထံမှ ကောက်ယူထားသော အိုင်ပီလိပ်စာများကို အသုံးပြု၍ သင်၏အများသုံးလတ္တီတွဒ်နှင့်လောင်ဂျီတွဒ်သတင်းအချက်အလက်များကို သင်၏အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် ပတ်သတ်၍ ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်အချို့သောအခြေအနေများတွင် စုပေါင်း၍ ဖော်ထုတ်ထားသည့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် YouVersion အသုံးပြုမှုတစ်ခုချင်းစီအတွက်ပထဝီဒေသကိုပုံဖော် ရန် အသုံးပြုသည်။ ဤလတ္တီတွဒ်နှင့်လောင်ဂျီတွဒ်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အား ၇ ရက်ခန့်ကြာအောင်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းအတွက်သိမ်းဆည်းထားသည်။ သို့သော်သင်နှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်မှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင့်အားမည်သူမည်ဝါနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
သင်သည် မိုဘိုင်းကိရိယာ မှ YouVersion ကို အသုံပြု၍ ၎င်း၏ အစီအစဥ်အင်္ဂါရပ်တို့ကို အသုံးပြုလိုပါက သင်၏အနီးပွဲများကိုရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက်လက်လှမ်းဖို့ YouVersion အဘို့အခွင့်ပြုချက်ပေးရန်နှင့်သင့် GPS တည်နေရာနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းစက်မှသတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိရန်သတိပေးခံရပါလိမ့်မည်။, အဖြစ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ သင်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသင်၏စက်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်တည်နေရာနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသင်၏အချက်အလက်နှင့်မည်သည့်အချက်အလက်မျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။ သင်ဤအချက်အလက်ကိုပေးရန်မလိုပါ၊ သို့သော် သင်မလုပ်ပါက၎င်းသည် အစီအစ် များကိုအပြည့်အအတိုင်းအတာအထိသုံးရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။
သင့်အနေဖြင့်သင်၏မိုဘိုင်းစက်၏ကြိုးမဲ့ (သို့မဟုတ်“ WiFi”) ခွင့်ပြုချက်များကိုသင် WiFi သို့မဟုတ်ဆယ်လူလာကွန်ယက်သို့ချိတ်ဆက်မှုမရှိသိရန် ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းအသုံးပြုသည်။ ဤအချက်အလက်သည်ဆယ်လူလာကွန်ယက်ထက်မြန်နှုန်းမြင့် WiFi ဆက်သွယ်မှုတွင်ရှိသည့်အသုံးပြုသူကိုပိုမိုမြင့်မားသော resolution မီဒီယာကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ WiFi ခွင့်ပြုချက်များကိုလည်း Chromecast နှင့်အလားတူကိရိယာများဖြင့်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဤအချက်အလက်ကို YouVersion မှသိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်မျှဝေခြင်းမရှိပါ
YouVersionမှ ထောက်ပံ့ ကူညီပေးနိုင်ပြီးစိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး သည့်အချက်မျာ‌ေတာင်းဆိုနိုင်။
လိုအပ်လျှင် ဖန်တီးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စိတ်တိုင်းကျ စီမံနိုင်ပြီး သင့်YouVersionအကောင့်ကို ထိန်းသိမ်းရန်။
YouVersion၏‌ေဘးကင်း‌ေရး၊ လုံခြုံရေး၊ တိကျမှန်ကန်ရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့် YouVersionမှစီစဉ်ထောက်ပံ့ပေးသောအခြေခံဖွဲ့စည္းမှု၏အသုံး၀င်မှု၊
YouVersion နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အတွင်းပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်၊
ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားနှင့် ပြဌာန်းချက်များကို ကြပ်မတ်ရန်နှင့်ဤ ကျွန်ုပ်တို့ ကန့်သတ်မူဝါဒတိ အပါအဝင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအောက်တွင် အသုံးပြုခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ;
ဒီ ကန့်သတ်မှု မူဝါဒထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း
သင်၏အသင်း ၀င်အကောင့်ကို ဖန်တီးရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန်သင်ပေးသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ သင်၏ သတင်းအချက်အလက်များကို သင်၏အကောင့်အားခွင့်ပြုရန်နှင့် အတည်ပြုရန်ဤအချက်အလက်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါသည်။ သင်၏အသင်း ၀င်အကောင့်နှင့်သင်၏ YouVersion အသုံးပြုမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောဤအချက်အလက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏အသင်း ၀ င်နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအမည်နှင့်အီးမေးလိပ်စာသည်သင့်အကောင့်၏မှန်ကန်သောအသုံးပြုသူအဖြစ်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်သင်၏အကောင့်အမည်သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့်အကောင့် ID နှင့် ဆက်စပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုသိမ်းဆည်းပြီးအသုံးပြုလိမ့်မည်။ သင်၏သုံးစွဲသူထည့် ၀ င်မှုများကိုသင်၏အသင်းဝင်အကောင့်နှင့်တွဲဖက်ပြီးသင့်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုခြင်း၊ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်း၊ တင်ခြင်းနှင့်အခြားအသုံးပြုသူများကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပါမည်။
YouVersion သည်သင့်အားကျမ်းစာအခန်းငယ်များ၊ အသုံးပြုသူထည့်ဝင်မှုများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများကိုဝေမျှရန်အခြား YouVersion အသုံးပြုသူများနှင့် ဆက်သွယ်၍ ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်၏အသင်း ၀ င်သည်အခြားအသင်း ၀ င်တစ် ဦး နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ သင်၏သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူပံ့ပိုးမှုများကိုမျှဝေခြင်းသည်သင်၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
အခြား YouVersion အသင်းဝင်များနှင့်သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်သင်၏စက်တွင်သိမ်းထားသောအဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့အားမျှဝေရန်သင့်အားရွေးချယ်လိမ့်မည်။ YouVersion ကိုသုံးရန် (သို့) မည်သည့်အသင်း ၀ င်တစ်ယောက်နှင့်မျှဆက်သွယ်ရန်ဤအချက်အလက်များကိုသင်မျှဝေရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေရန်သင်ဆုံးဖြတ်ပါကသင်၏ YouVersion ဆက်သွယ်မှုများကိုအခြား YouVersion အသင်းဝင်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်သင် YouVersion အသင်းဝင်အကောင့်ရှိသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့မှသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ သင်၏အကြံဥာဏ်များ၊ အဆက်အသွယ်တစ်ခုမည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းအကြောင်းကြားရန်သို့မဟုတ် YouVersion သို့ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုအတွက်သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်သင်၏အဆက်အသွယ်များအားဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည့်အခါထိုအချက်အလက်များကိုသင့်အားဤလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုကမ်းလှမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများပေါ်တွင် hashed ပုံစံဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ။
YouVersion Events သည်အနီးအနားရှိ ဘုရားကျောင်းများနှင့်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပွဲတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောနေရာများကိုရှာဖွေရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားပေးထားသောအကြောင်းအရာများနှင့်အတူလိုက်နာရန်၊ မှတ်စုများယူရန်နှင့်အနာဂတ်ရည်ညွှန်းရန်အတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင်မိတ္တူများကိုသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်များကိုသင်၏တည်နေရာနှင့်ဆက်စပ်ရန်သင့် GPS တည်နေရာကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဥ်အင်္ဂါရပ်ကိုပထမဆုံးအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်သောအခါ၊ သင်၏ GPS တည်နေရာကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေရန်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ GPS တည်နေရာကိုပေးရန်သင်ရွေးချယ်ပါက၎င်းအချက်အလက်များကိုသင့်အနီးရှိဖြစ်ရပ်များစာရင်းတစ်ခုတည်းအတွက်သာအသုံးပြုလိမ့်မည်။ GPS တည်နေရာသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၇ ရက်ခန့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက်သိမ်းဆည်းထားသည်။ သို့သော်သင်၏ဒေတာဘေ့စ်တွင်သင်မည်သည့်သီးခြား YouVersion အသင်းဝင်နှင့်မဆိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ သင်၏ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်များအသုံးပြုမှုကဏ္ဍ ပြီးဆုံးသည်နှင့်သင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံမရရှိလျှင်သင်၏ GPS တည်နေရာနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ သင်ပထမအကြိမ်ဖြစ်ရပ်များကို အသုံးပြု၍ သင်၏ GPS တည်နေရာကိုအသုံးပြုရန်သဘောတူပြီးနောက်၊ သင်၏ကိရိယာ၏ဆက်တင်များ (သို့) သမ္မာကျမ်းစာ အက်ပလီကေးရှင်း နှင့်အစီအစဥ်အင်္ဂါရပ်များမှထိုသဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုသင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းမရှိပါကဖြစ်ရပ်များကိုနောက်ဆက်တွဲအသုံးပြုမှုအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏ GPS တည်နေရာကိုမျှဝေရန်မရွေးချယ်ပါက သင်သည် အစီအစ် အင်္ဂါရပ်ကိုသုံးနိုင်သေးသည်၊ သို့သော်အမည်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ မြို့၊ နိုင်ငံ သို့မဟုတ် စကားလုံးဖြင့် ရှာဖွေရပါမည်။
သင်၏ဆုတောင်းချက်၊ သမ္မာကျမ်းစာအခန်းကြီးများနှင့်သမ္မာကျမ်းစာအစီအစဉ်များ၊ ထိုအကြောင်းအရာကိုအသုံးပြုရန်သင်ရွေးချယ်သောဘာသာစကားတို့သင်ပါဝင်သည့် အရာများကဲ့သို့သော သင်၏ YouVersion နှင့် ပါဝင်အကြောင်းအရာများအသုံးပြုမှု ပုံစံတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။ Bookmarks, Highlights နှင့် Notes ကဲ့သို့သောသင်ဖန်တီးထားသောအသုံးပြုသူထည့် ၀ င်မှုများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသိုလှောင်ပါသည်။ YouVersion တစ်ခုချင်းစီမှသင်ဖန်တီးထားသော (သို့) သင်ဝင်ရောက်လိုသောအကြောင်းအရာများကိုရယူရန်နှင့်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုရန်ဤအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပါသည်။
သင်၏ Device သို့ YouVersion ပါဝင်သောအကြောင်းအရာနှင့် User Contribution အချို့ကိုဒေါင်းလုပ်ချလုပ်ခြင်းရှိ / မရှိရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ဖုန်းသိုလှောင်မှုသို့ YouVersion အား ၀ င်ရောက်ခွင့်ကိုဤဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောအကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်း။ ပြောင်းလဲရန်သင့်အားရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ သင်၏စက်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ကို YouVersion မှသာသင်တောင်းဆိုထားသောအကြောင်းအရာကိုသင်၏စက်ထဲသို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
YouVersion သတင်းအချက်အလက်နှင့်အကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးခြင်း၊ ရယူခြင်း (သို့) သိမ်းဆည်းခြင်းသည်သင်၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သင်ပြုလုပ်ပါက၎င်းကိုသင်၏အသင်း ၀ င်အကောင့်နှင့်ပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။ သင်၏ YouVersion နှင့် Life.Church အကြောင်းအရာများကိုသင့်အားအကြံပြုချက်များပေးရန်သင်၏ YouVersion ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိုအသုံးပြုမှုမှပေါ်လာသောအခြခံအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ပြီးပြီဖြစ်သောကျမ်းစာအစီအစဉ်ကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့အားနောက်ထပ်ကျမ်းစာအစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုနိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်သည်ဤအကြံပြုချက်များကိုအီးမေးလ်ဖြင့် ရောက်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့မှ သတိပေးချက်အီမေးလ်များ သို့မဟုတ် in-app message များမှတဆင့်ဆက်သွယ်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကသင့်အားအီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါကယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်ဤစာများကိုပေးသောအီးမေးလ်များရှိ unsubscribe link မှတစ်ဆင့်ဤစာများအားသင်မှာယူနိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင်သည့် YouVersion သမ္မာကျမ်းစာ App ကို၏ Settings menu ကိုအတွင်းသို့မဟုတ်သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင့်ရဲ့အကြောင်းကြားစာ settings ကို bible.com/notification-settings။
အချို့သောအကြောင်းအရာများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများအပြင် YouVersion မှတစ်ဆင့်ပေးသောထပ်ဆောင်းထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုရန်နှင့်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များနှင့်ထိုအချက်အလက်များမှပြုလုပ်သောအခြခံများကိုအသုံးပြုသည်။ Life.Church မှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်အားလုံး၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခြား Life.Church ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်သင်ပေးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ သင်ပေးသောသတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အခြား Life.Church ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်သင့်အားအကြံဥာဏ်များပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကြံပြုချက်များ၊ YouVersion ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နှင့်အခြား YouVersion သတင်းမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်တွန်းအားပေးသောအသိပေးချက်၊ အီးမေးလ် (သို့) In-app မက်ဆေ့ခ်ျများမှတဆင့်သင့်အားဆက်သွယ်နိုင်သည်။
မဲစစ်တမ်းများနှင့် အချက်အလက်စစ်တမ်းများကိုတစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့မှ YouVersion မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သည်။ သင်သည်မဲစစ်တမ်းများသို့မဟုတ် အချက်အလက်စစ်တမ်းများကိုတုံ့ပြန်ရန်တာ ၀ န်မရှိပါ၊ သင်ပေးသောသတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌ရွေးချယ်မှုရှိသည်။ ဤစစ်တမ်းများနှင့်စစ်တမ်းများ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကွဲပြားနိုင်သဖြင့်မည်သည့်စစ်တမ်းသို့မဟုတ်စစ်တမ်းမဆိုသင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကို YouVersion ပတ်သက်သော ဥပဒေရေးရာ၊လုံခြုံရေး၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်တိုင်ကြားမှုများကို စုံးစမ်းရန်၊ တုန့်ပြန်ရန် နှင့် ဖြေရှင်းရန် အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းကို လိုအပ်သော လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများ အတွက် သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်သောလိမ်လည်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ကျွန်တော်တို့၏ အသုံးပြုခြင်း၏စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ်ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ (သို့) မိမိကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်အခြားသူများအားအန္တရာယ်ပြုရန်ကြိုးစားခြင်း။ သင်၏အကောင့်လုံခြုံရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ရန်သင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှဤသတင်းများကိုလက်ခံခြင်းကိုသင်ငြင်းပယ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံခြုံရေးအဖြစ်အပျက် (သို့) အချက်အလက်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအသိပေးချက်ကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသုံးနိုင်သည်။ (၂) လူသိများသော YouVersion စာမျက်နှာသို့ (သို့) In-app စာသတင်းပို့ခြင်း။ (၃) တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားရှိသတင်းမီဒီယာများ၊ နှင့် / သို့မဟုတ် (၄) ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် / သို့မဟုတ်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများအပါအ ၀ င်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းများ၊ အလိုအလျောက်တပ်ဆင်ထားသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအပါအ ၀ င်အလိုအလျောက်ပေးပို့ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပုံမှန်စာသားနှင့်ဒေတာမက်ဆေ့ခ်ျပို့မှုနှုန်းသည်သင်အသုံးပြုသော ဝန်ဆောင်မှုမှသက်ရောက်နိုင်သည်။ အီးမေးလ်ဖြင့်ပို့သည့်သတိပေးချက်များသည်အီးမေးလ်ပို့သောအခါသက်ရောက်လိမ့်မည်၊ ပို့စ်တင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောသတိပေးချက်များသည်ပို့စ်တင်သည့်အခါနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပြုလုပ်သည့်အခါ In-app messaging အားဖြင့်ပြုလုပ်သည့်အခါရောက်လိမ့်မည်။ YouVersion နှင့်ပတ်သက်သော Life.Church နှင့်သင်၏အသုံးပြုမှုကို YouVersion မှတစ်ဆင့်ပေးသောဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူခြင်းမှအီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးကိုသင်လက်ခံရန်သင်သဘောတူသည်။ သင်၏ဆက်သွယ်မှုအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့နိုင်ရန်သင်၏အီးမေးလိပ်စာနှင့်အခြားကျွန်ုပ်တို့အားသင်ပေးသောအခြားဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုသိမ်းထားခြင်းသည်သင်၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် YouVersion အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောလူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်ပထဝီအနေအထားပြောင်းလဲမှုများကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် YouVersion အကြောင်းအရာအသုံးပြုမှုအပြင်ထိုအချက်အလက်များမှရရှိသောအခြခံတွင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြည်တွင်း၌ဆန်းစစ်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်ကျွန်တော်တို့ သည်သင်၏ လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ပြုလုပ်ထားသော ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ၊ ဆန်းစစ်ရန် ယုံကြည်စိတ်ချသောအခြားအဖွဲ့များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် YouVersion အကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး တစ်ယောက်သို့မဟုတ်ထိုအသုံးပြုသူကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်သောအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်မထားသည့်ဖယ်ထုတ်ထားခြင်းနှင့်အမည်ဝှက်ထားသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုစည်းထားသည့်ပုံစံဖြင့်ထုတ်ဖော်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ သတ်မှတ်သောာပထဝီဒေသများ၌ YouVersion ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောကိန်းဂဏန်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်သင်၏အချက်အလက်များကိုသုံးနိုင်သည်။
YouVersion အသင်း ၀ င်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် YouVersion ထည့်သွင်းမှုစုစုပေါင်းအရေအတွက်ကိုကျင်းပခြင်းကဲ့သို့သောကွန်ယက်တိုးပွားမှုအပါအ ၀ င် YouVersion ကိုစျေးကွက်တင်ရန်အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုဖော်ထုတ်ပြီးစုစည်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ YouVersion ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူးပေါင်းမှုကဲ့သို့သောလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်သောကိန်းဂဏန်းများကိုတွေ့သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်အလက်များကိုစုစည်းထားသည့်ပုံစံဖြင့်ဆန်းစစ်ရန်နှင့်ထုတ်ဝေရန်၊ သင်၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သင်၏မည်သူမည်ဝါနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလျှို့ဝှက်ထားရန်သေချာအောင်လုပ်မည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော YouVersion အတွေ့အကြုံကိုရရှိစေရန်အတွက်အတွင်းပိုင်းသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ အသုံးပြုသူအချက်အလက်စုစည်းခြင်း၊ YouVersion အသုံးပြုခြင်းမှရရှိသောအချက်အလက်များ၊ အများပြည်သူ၏တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်ဤအချက်အလက်များမှကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များအပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေတာကိုအသုံးပြုသည်။ YouVersion ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် YouVersion နှင့်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ရရှိနိုင်သည့် YouVersion ကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် YouVersion မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုသူများကို YouVersion ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အကြောင်းအရာများကိုပေးပို့ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
YouVersion ကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်မည်သည့်ဘာသာရေးဂိုဏ်းဂဏစွဲရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မယူဆပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောအကြောင်းအရာများကိုသင်စိတ်ဝင်စားသည်ဟုသာယူမှတ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်ချက်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်သို့မဟုတ် YouVersion အသင်းဝင်အကောင့်ကိုဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်လူမျိုး၊ လူမျိုးစု၊ အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစသည့်အခြားအရေးကြီးသည့်အချက်အလက်များကိုပေးဖို့ကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်ပါ။ YouVersion အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောအတွေးများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖန်တီးရန်၊ သိမ်းဆည်းရန်နှင့်မျှဝေရန်အတွက် YouVersion ၏အချို့သော YouVersion လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် option တွင် Prayers ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းတို့အတွက်သင်ရွေးစရာရှိသည်။ သင်ဖန်တီးထားသောအသုံးပြုသူပံ့ပိုးမှုများအတွင်းအထိခိုက်မခံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသင့်၊ မပေးသင့်ရွေးချယ်မှုသည်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အထိခိုက်မခံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်ရွေးချယ်ပါက၎င်းအချက်အလက်များကိုသင့်အတွက်ပိုမိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော YouVersion အတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရန်နှင့်အကြောင်းအရာဝေမျှခြင်းသို့မဟုတ်သိုလှောင်ခြင်းကဲ့သို့သော YouVersion မှတစ်ဆင့်သင်တောင်းဆိုသည့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်သင်ပေးသောအခြားအထိခိုက်မခံသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သည်။ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို Life.Church သည်သင့်ကိုယ်စား Life.Church ၏တရားဝင်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအထိခိုက်မခံသောအချက်အလက်များကိုသာဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ ဤမူဝါဒ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်တောင်းဆိုသည့်မည်သည့်ထပ်ဆင့်တောင်းဆိုချက်များကိုမဆိုသာဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ သင်၏မူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ Life.Church မှပေးအပ်ထားသောသင့်လျော်သောအကာအကွယ်များနှင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားပါမည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိသင့်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရ help@youversion.com။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သည့်တတိယပါတီကိုမှကြော်ငြာရှင်များသို့မဟုတ်ကြော်ငြာကွန်ယက်များအား၎င်းတို့ကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မရောင်းချပါ။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း YouVersion, ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတတိယပါတီများသို့ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော်နိုင်သည်။
သတင်းအချက်အလက်ကို YouVersion မှတဆင့်ဝေမျှသောအခါ၊ ၎င်းအချက်အလက်ကိုသင်နှင့်သင်မျှဝေရန်အခြားရွေးချယ်သူများမှသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သင်၏ခွင့်ပြုချက်အပေါ် မူတည်၍ သင်၏ YouVersion အကောင့်ကိုအခြားအပလီကေးရှင်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုခွင့်ပြုလျှင်၎င်းဝန်ဆောင်မှုများသည်သင်၏မျှဝေထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီ ၀ န်ဆောင်မှုများမှသင်၏အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်းနှင့်ကာကွယ်မှုသည်ထိုတတိယပါတီ၏မူဝါဒများအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Life.Church အတွင်း၌ YouVersion နှင့်သင်၏အခြားထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအချက်အလက်များနှင့်သင်နှင့်အခြားသူများအတွက်သင်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကူညီပေးပါမည်။
ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်စုဆောင်းထားသောသို့မဟုတ်သင်ပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကန်ထရိုက်တာများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်သင်အသုံးပြုသောအခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များ (Cloud hosting, cookie ပေးသူ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စာရင်းစစ်ခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းစသည့်) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိမည်။ လိမ်လည်မှု၊ ထောက်လှမ်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး) ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ YouVersion မှပေးသောအီးမေးလ်များနှင့်သတိပေးချက်များကိုပေးပို့ရန်အသုံးပြုသောပလက်ဖောင်းအချို့ကိုတတိယပါတီများကတည်ဆောက်ပြီးစီမံသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုထို ၀ န်ဆောင်မှုများသို့လုံခြုံမှုရှိစွာပို့ဆောင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားဤတာ ၀ န်များကိုထမ်းဆောင်ရန်သင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာသာသင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့ရရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုအခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထုတ်ဖော်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းမပြုရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သမ္မာကျမ်းစာစီမံကိန်းများကဲ့သို့သောအချို့သော YouVersion အကြောင်းအရာများကိုအချို့သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် YouVersion သုံးစွဲသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဤတတိယပါတီများနှင့်မျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အမည်ဝှက်ထားခြင်းမရှိသောအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ တိုင်းပြည်အားဖြင့်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စုစုပေါင်းသရုပ်ခွဲဆန်းစစ်မှုများကိုပေးသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာပြန်ကျမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျမ်းစာအသင်းအဖွဲ့များနှင့်ထုတ်ဝေသူများအကြားသဘောတူညီမှုများကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့က“ YouVersion Bible Providers” ဟုခေါ်သည်။ YouVersion Bible Provider များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသောလိုင်စင်သဘောတူညီချက်များသည် YouVersion ကျမ်းစာပံ့ပိုးသူများအားအသုံးပြုသူ၏အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်အနာဂတ်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်တိုင်းပြည်ကိုပေးအပ်ပါက YouVersion အသုံးပြုသူများအားအချို့သောကျမ်းစာစာသားများကိုအော့ဖ်လိုင်းအသုံးပြုရန်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ရန်သာခွင့်ပြုသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အော့ဖ်လိုင်းအသုံးပြုရန်အတွက်သင် download ဆွဲလိုသည့်စာသားများနှင့် ပတ်သက်၍ ဤသို့ဆိုလျှင် (၁) သင်တောင်းဆိုသောအော့ဖ်လိုင်းမူကွဲအတွက် YouVersion Bible Provider နှင့်သာသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေမည်။ (၂) သင်၏လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကို YouVersion Bible Provider ကလျှို့ဝှက်ထားသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ (၃) ဤဝေါဟာရများကိုသတိပေးမှုတစ်ခုအနေဖြင့်သင့်အားနောက်ထပ်အချက်ပေးမှုတစ်ခုပေးပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ download လုပ်ခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ထိုအချိန်တွင်သင်သဘောတူရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤထပ်တိုးအချက်ပေးချက်ကိုသဘောမတူပါကသင်သည်အွန်လိုင်းစာသား၏မူကွဲကိုဆက်လက်သုံးနိုင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို YouVersion Bible Providers များနှင့်မျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြချက်အားခွင့်ပြုချက်မပေးမချင်းမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှဝေငှမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ထိုအော့ဖ်လိုင်းဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သင့်အားပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ YouVersion ကျမ်းစာပံ့ပိုးသူများနှင့်သင်၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်သင်နှင့်သင်Version Bible Provider တို့တွင်တစ်ခုတည်းသာရှိသည်။
ဥပဒေ၊ ဆင့်ခေါ်စာ (သို့) အခြားတရား ၀ င်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအရသင်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဥပဒေအရသို့မဟုတ်တရားရုံးအမိန့်ဖြင့်တားမြစ်ခြင်းမရှိပါကသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုသည်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်တွင်သင့်လျော်ပါက၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအတွက်တရားဝင်တောင်းဆိုမှုများကိုအသုံးပြုသူများအားကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းကြားရန်ကြိုးစားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်တောင်းဆိုမှုများသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီးမရေမရာသို့မဟုတ်သင့်လျော်သောအခွင့်အာဏာမရှိဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများကိုအငြင်းပွားနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်းဆိုမှုတိုင်းကိုစိန်ခေါ်မည်ဟုကတိမပေးပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်းသည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာလိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည် (၁) သံသယဖြစ်ဖွယ်သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်တရားမ ၀ င်သောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ (၂) ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သဘောတူညီချက်များကိုသင်နှင့်လိုက်နာစေခြင်း၊ (၃) တတိယပါတီ၏စွပ်စွဲချက်များသို့မဟုတ်စွပ်စွဲချက်များမှမိမိကိုယ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊ ()) YouVersion ၏လုံခြုံရေးသို့မဟုတ်သမာဓိကိုကာကွယ်ပါ။ သို့မဟုတ် (၅) Life.Church, အသုံးပြုသူ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းများသို့မဟုတ်အခြားသူများ၏ဘဝနှင့်လုံခြုံမှုကိုလေ့ကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုရောင်းချခြင်း (သို့) သိသိသာသာရောင်းချခြင်းကဲ့သို့သောအလားအလာရှိသောသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ပေါင်းစည်းခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလျှို့ဝှက်ထုတ်ဖော်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
ပယ်ဖျက်ခြင်း: သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်အားလုံးသို့မဟုတ်အချို့ကိုဖျက်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်သင်၏ YouVersion ၏အချို့သောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကန့်သတ်ထားနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်၏အလားအလာရှိသောသုံးစွဲသူများအားမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ရန်အီးမေးလ်လိပ်စာတွင်အသင်းဝင်အကောင့်တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။
ပြင်ဆင်ခြင်း / ပြုပြင်ခြင်း- သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့ကိုသင်၏အကောင့်မှတစ်ဆင့်ပြင်ဆင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်သင့်အချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲရန်၊ အသစ်ပြောင်းရန်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုနိုင်သည်။
သင်၏အချက်အလက်များကိုရယူပိုင်ခွင့်နှင့် / သို့မဟုတ်ယူဆောင်ခွင့်- ကျွန်ုပ်တို့အားသင်ပေးအပ်ထားသောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမိတ္တူတစ်စုံတောင်းရန်သို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
အချို့သောဥပဒေများသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤထပ်မံတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပေးပြီးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဒေသဥပဒေတစ်ခုအရတောင်းခံလိုပါကသင်၏တောင်းဆိုမှုကို help@youversion.com သို့ပို့ပြီး“ [သင်၏နိုင်ငံ / နိုင်ငံ] သီးသန့်လုံခြုံရေးတောင်းဆိုခြင်း” ဟူသောစကားစုကို မျဥ်းကြောင်းဆွဲပြီးတွင်ထည့်ပါ။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုလေးစားမှုနှင့်အတူဤအသို့မဟုတ်အခြားတောင်းဆိုမှုများကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ သင်အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ help@youversion.com သို့မဟုတ် Life.Church, attn.: ရန်သင့်တောင်းဆိုမှုကိုမေးလ် YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond , Oklahoma 73034 ။
တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်အနည်းဆုံး ၄ င်းတို့၏အမည်၊ လိပ်စာနှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်နှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မလုပ်ဆောင်မီလိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုရယူရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်တောင်းဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်းဆိုသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းမပြုနိုင်ပါကတောင်းဆိုမှုသည်အခြားသူများ၏ privacy ကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါကတောင်းဆိုမှုသည်မည်သည့်ဥပဒေသို့မဟုတ်ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များကိုဖောက်ဖျက်မည်ကိုယုံကြည်ပါက တောင်းဆိုမှုသည် သတင်းအချက်အလက်ကို မမှန်ကန်သောသို့မဟုတ်အလားတူရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါက ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမှ ငြင်းဆန်နိုင်သည်။
သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေအရသင်၏အခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးခြင်းအတွက်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြားဆက်ဆံမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏အတည်ပြုတောင်းခံမှုအားအလွန်အကျွံ၊ ထပ်ခါတလဲလဲသို့မဟုတ်အခြေအမြစ်မရှိသောအခြေအနေ မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အခကြေးငွေမယူပါ။ အကယ်၍ တောင်းဆိုမှုသည်အခကြေးငွေကိုခိုင်မာစေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရကြောင်းနှင့်သင့်တောင်းဆိုမှုမပြီးဆုံးမီသင့်အားကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်၏အကောင့်ကိုပိတ်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်အချို့သို့မဟုတ်အားလုံးအားပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ရန်တောင်းဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်၊ အငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန်တရား ၀ င်အခွင့်အရေးသို့မဟုတ်တာဝန်ရှိပါကသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ လုံခြုံရေး၊ လိမ်လည်မှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုကိုကာကွယ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများကိုပြenfor္ဌာန်းခြင်းသို့မဟုတ်သင့်ထံမှအခြားတောင်းဆိုမှုများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည် (ဥပမာ၊ နောက်ထပ်သတင်းစကားများကိုငြင်းပယ်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏အချက်အလက်မိတ္တူတစ်စောင်အတွက်) သို့မဟုတ်ပါကသင်၏အကောင့်ကိုပိတ်ရန်သင်တောင်းဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အကောင့်နှင့် သင်၏အကောင့်နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ သင်၏အကောင့်နှင့်ဆက်စပ်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်းမပြုဘဲ YouVersion ကိုသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အချက်အလက်များပါဝင်သည့်စုစုပေါင်းသင် download လုပ်ထားသော YouVersion application အရေအတွက်၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်။
သင်၏အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖျက်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏အကောင့်ကိုသင်ဖျက်ပစ်ရန်သင်တောင်းဆိုပြီးနောက် YouVersion မှသင်အခြားသူများအားသင်မျှဝေထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ သင်မျှဝေထားသောသင်၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်အကြောင်းအရာများသည်သူတို့၏ယာယီသိမ်းဆည်းမှုကိုမမှီမချင်းအခြားသူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ (ဥပမာ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်များ) တွင်ဆက်လက်ပြသလိမ့်မည်။
သင်၏အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောလုံခြုံရေးအကာအကွယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းတို့တွင်သင်၏စက်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဘရောင်ဇာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများအကြားကူးစက်နေစဉ်နှင့်၎င်းနားနေချိန်အတွင်းသင်၏ဒေတာအတွက်စာဝှက်ခြင်းအသုံးပြုခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ YouVersion မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအချက်အလက်ကိုလည်း ISO 27017 အသိအမှတ်ပြုထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်စစ်ဆေးခြင်းခံရပြီးသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုအတွက်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုကျင့်ထုံးစံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သော ISO 27017 ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ Cloud ၀ န်ဆောင်မှုတွင်တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၏သဘောသဘာဝနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်များရှိသည်ဟုဆိုသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအားနည်းချက်များနှင့်တိုက်ခိုက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသော်လည်း YouVersion မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်များတွင်သိုမှီးထားသည်သို့မဟုတ် မဟုတ်လျှင်အခြားသူများကခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းမှလုံးဝလွတ်မြောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအကာအကွယ်များမှတစ်စုံတစ်ရာကိုချိုးဖောက်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခြင်းမပြုရရန်ကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်သည်။
အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကလေးများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသက် ၁၆ နှစ်အောက်မိဘများသို့မဟုတ်ထိုအကလေး၏တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူများ၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှမကောက်ယူပါ။
မိဘတစ် ဦး သို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူသည်သင်၏ YouVersion အကောင့်အားမိဘသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူ၏အဓိကပရိုဖိုင်းသို့မဟုတ်သမ္မာကျမ်းစာ / ကလေးများအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းဟုခေါ်သောပလက်ဖောင်းတွင်မိဘ / အုပ်ထိန်းသူအကောင့်၏ဒုတိယပရိုဖိုင်းတွင်သင်၏ YouVersion အကောင့်ကိုအသုံးပြုရန်သဘောတူနိုင်သည်။ သင်၏အသေးစားကလေးအားသင်၏အကောင့် (သင်၏ပရိုဖိုင် (သို့) ကလေးများအတွက်ပရိုဖိုင်ပရိုဖိုင်မှတစ်ဆင့်) ကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုလျှင်၊ သင်သည်အသေးအဖွဲ၏ YouVersion အသုံးပြုမှုကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်နှင့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်အပြည့်အဝတာဝန်ယူရမည် သို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များကို YouVersion မှတစ်ဆင့်ပေးသည်။
ဒုတိယပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်သင်၏အကောင့်ကိုသင်၏အသုံးပြုသူသတင်းအချက်အလက်ဖြင့်ဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းအတွက်သမ္မာကျမ်းစာအက်ပလီကေးရှင်းပရိုဖိုင်အားတစ် ဦး တည်းပိုင်ထိန်းချုပ်လိမ့်မည်။ ကလေးငယ်များအတွက်သမ္မာကျမ်းစာအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖန်တီးရန်သင့်ကလေးငယ်နှင့်ပတ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားဖွင့်ဟရန်ကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်ပါ။ သင်၏အရွယ်မရောက်သေးသောကလေးအတွက်ပရိုဖိုင်တစ်ခုတည်ဆောက်သောအခါသင်သည်အကောင့်ကိုဖော်ထုတ်ရန်“ ကလေး၏အမည်” ကိုပေးရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်၊ ဤနာမည်သည်သင်ရွေးချယ်သည့်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုသင့်ကလေး၏နာမည်အမှန်နှင့်နောက်ဆုံးအမည်ကိုဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်သည်သင်၏ကလေး၏အချက်အလက်များကိုသင်၏အကောင့်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အခါဤမူဝါဒနှင့်အခြားသီးသန့်သတိပေးချက်များနှင့်အချိန်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်သည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုကိုသင်သဘောတူမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆလိမ့်မည်။ သင်၏ကလေးအား YouVersion ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးလျှင်၊ သင်၏ကလေးများအားအင်တာနက်ပေါ်တွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမျှဝေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအန္တရာယ်များကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်၎င်းတို့သည်တတိယပါတီများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမပြုရန် (သို့) YouVersion (သို့) YouVersion အသုံးပြုသူများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်တောင်းဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက် 16 နှစ်အောက်ကလေးတစ် ဦး ထံမှသို့မဟုတ်အကြောင်းတစ်ခုခုရှိနိုင်မည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါက help@youversion.comတွင်ဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တရားဝင်အချက်အလက်များရှိသည့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသာစုဆောင်းပြီးဆောင်ရွက်ပါမည်။ တရားဝင်ဖြစ်သောအခြေခံတွင်သဘောတူညီချက် (သင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးပါက)၊ စာချုပ်နှင့်အခြားတရားဝင်အကျိုးစီးပွားများပါ ၀ င်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောတရားဝင်အကျိုးစီးပွားများ၌သင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၊ အခြားအသင်းဝင်များနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားအကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ သက်ဆိုင်သောဥပဒေကိုလိုက်နာရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန်၊ ကော်ပိုရေးရှင်းအရောင်းအစီမံခန့်ခွဲရန်, ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းဖြစ်စဉ်များနှင့်သုံးစွဲသူများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုနားလည်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်၊ အထက်ဖော်ပြပါသည်သင်၏အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုလုံလောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်နှင့် YouVersion ၏အခြားအသုံးပြုသူများအားသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်နိုင်ရန်သင်နှင့်သင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏ခွင့်ပြုချက်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့အားကိုးအားထားပြုသည့်အတွက်သင်သည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်နိုင်သည်။ တရားဝင်စိတ်ဝင်စားမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့မှီခိုသည့်အတွက်သင်ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းပြီးအသုံးပြုသည့်ဥပဒေအရေးနှင့်ဆိုင်သောအခြေခံအကြောင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါက help@youversion.comတွင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သတိရပါ၊ YouVersion တွင်အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များသို့မဟုတ်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိနိုင်သည်။ YouVersion သို့မဟုတ်သင်မှချိတ်ဆက်ရန်ရွေးချယ်သောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ သီးသန့်မူဝါဒ ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်ပေါ်လစီများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင့်တွင်တာ ၀ န်ရှိသည်။ သို့မှသာထိုဝက်ဘ်ဆိုက်များကသင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သို့စုဆောင်း၊ အသုံးပြုသည်နှင့်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်ကိုနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ YouVersion မှသို့မဟုတ်သင်ချိတ်ဆက်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များအပါအဝင်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်အက်ပလီကေးရှင်းများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ မူဝါဒများသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ပူးတွဲအမှတ်တံဆိပ်ပါ ၀ င်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များ (ကျွန်ုပ်တို့၏နာမည်နှင့်တတိယပါတီ၏အမည်ကိုကိုးကား) သည်ကျွန်ုပ်တို့မဟုတ်ဘဲတတိယပါတီမှပေးပို့သောအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သည်။
YouVersion ကိုအခြား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်တတိယပါတီအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ရွေးချယ်ပါကထိုအသုံးချပရိုဂရမ်များပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Life.Church သို့ပေးလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင် Facebook မှတဆင့် Life.Church သို့ဝေမျှရန်ရွေးချယ်ထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏ Facebook အကောင့်ကို YouVersion နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး YouVersion အသင်း ၀ င်အကောင့်အသစ်ကိုစတင်နိုင်သည်။ ထိုအပလီကေးရှင်းများနှင့်သင်၏ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအကောင့်များနှင့်တတိယပါတီ application များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
YouVersion သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဥက္ကလာဟိုးမားပြည်နယ်မှအခြေစိုက်ပြီးသင်၏ YouVersion ကိုသင်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဥက္ကလာဟိုးမားပြည်နယ်၏ဥပဒေများဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်။ သင်သည်ဤပြည်နယ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှ YouVersion ကိုအသုံးပြုနေပါကသင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများတည်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟိုဒေတာဘေ့စ်လည်ပတ်ထားသောယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုလွှဲပြောင်းခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပရှိအချက်အလက်များကိုစီမံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကုမ္ပဏီများအကြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလွှဲပြောင်းပေးသောကုမ္ပဏီများအကြားစာချုပ်ပါကတိက ၀ တ်များအပေါ်တွင်မှီခိုရသည်။ ဥက္ကလာဟိုးမားပြည်နယ်၊ ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်အခြားတိုင်းပြည်များ၏ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အခြားဥပဒေများသည်သင်၏ပြည်နယ်သို့မဟုတ်တိုင်းပြည်ရှိဥပဒေများကဲ့သို့ပြည့်စုံမှုမရှိပေ။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း YouVersion ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဆောက်အ ဦ များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသူတတိယပါတီများ၏အဆောက်အအုံများသို့လွှဲပြောင်းခြင်းကိုသင်သဘောတူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အထများပြောင်းလဲမှုများကိုထင်ဟပ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအားအခါအားလျော်စွာအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ Life.Church သည် YouVersion ကိုကမ်းလှမ်းရန်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်ရန်နည်းလမ်းသစ်များနှင့်တိုးတက်မှုနည်းလမ်းများကိုတသမတ်တည်းရှာဖွေနေသည်။ YouVersion ကိုကျွန်ုပ်တို့တိုးတက်သည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်အချက်အလက်အသစ်များစုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဒေတာအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းသစ်များကိုဆိုလိုသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် YouVersion သည်တက်ကြွလှုပ်ရှားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေရန်ကြိုးစားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲများကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပါကသင်၏အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပြောင်းလဲသည်ဆိုပါကဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုကျွန်ုပ်တို့အသစ်ပြောင်းမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအပြောင်းအလဲများကိုဤစာမျက်နှာတွင်တင်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့ပြောင်းလဲပုံကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည် သီးသန့်ရပ်တည်မှုအား အဆင့်မြှင့်ထားကြောင်းသတိပေးအကြောင်းကြားပါမည်။ သီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီနောက်ဆုံးပြင်ဆင်သည့်နေ့စွဲကိုမူဝါဒအစတွင်ဖော်ထုတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်သင့်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်တက်ကြွပြီးပေးပို့နိုင်သောအီးမေးလ်လိပ်စာရှိကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုစစ်ဆေးရန်ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီသို့အခါအားလျော်စွာသွားရောက်ခြင်းအတွက်သင့်တွင်တာဝန်ရှိသည်။
ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုကျင့်ထုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌ရှိနိုင်သောမည်သည့်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါတယ်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များရှိပါက Life.Church, Attn.: YouVersion Support၊ 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 သို့အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ် help@youversion.com သို့ဆက်သွယ်ပါ။